एकै प्रकृतिका घटनामा विभेद किन ? - Kantipath.com
एकै प्रकृतिका घटनामा विभेद किन ?
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै “हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैवर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।” उल्लेख गरेको छ ।
यसको भावना बिपरित गरिने क्रियाकलाप संविधान बिरुद्धको कार्य ठहरिन्छ । संविधान जारी भए पछाडी बिगतका शासन ब्यवस्थाले गरेको बिभेदहरुको अन्त्यको घोषणा संविधानको प्रस्तावनामा नै यसरी”सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै ” उल्लेख गरेको छ ।
मैले यस लेखमा चर्चा गर्न खोजेको विषय संविधानको प्रष्ट ब्यवस्थालाई किन समाजबाद उन्मुख राज्यको सरकार बिभेदरहित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकि रहेको छैन । नेपालको संविधान बिश्वको उत्कृष्ट लाई मध्ये पर्दछ । समानुपातिक ,समावेसी तथा सहभागिता मुलक सिद्धान्तको अंगिकार बिश्वकै नमूना योग्य छ हाम्रो संविधान मा तर यसको ब्यावहारिक प्रयोग कता तिर जाँदै छ । कस्तो खालको सामाजिक ब्यावस्थाको नजिर स्थापित गर्दैछ राज्य सत्ता !!
अहिले केही दिन देखि नेपाली समाजमा आस्था राउत जो नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको उदियमान गायिका समेत हुन उनले विमान स्थलमा प्रहरी माथी गलत व्यवहार गरेको र सामाजिक संजाल मार्फत प्रहरी संगठनलाई अपमान गरेको भनि हिरासतमा लिएर कारबाही गरियाे । उनले समेत सोकुरा स्विकार गरि सकेकी छन । म कानुनी राज्यको पक्षधर भएको नाताले उनले गल्तिको भगिदार हुनु पर्छ । तर त्यही विमान स्थलमा अर्का नेपाली नागरिक जसले नेपाल प्रहरिको एक जना अधिकृतलाई धक्का दिए र तथानाम गाली गरे ।
त्यो भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल समेत भयो । उनले सामाजिक संजालमा प्रहरी माथी धक्कामुक्का गरेको कुरा स्विकार्दै क्षमा मागे र त्यो कुनै कसुर बनेन !! उनलाई प्रहरी संगठन तथा कानुन कार्यान्वयनको कुनै निकायले सचेत गराउने सम्मको आवस्यकता सम्झेन किन ? के उनी हिजोको राजपरिवारका सदस्य थिय त्यसैले उनलाई त्यति गर्ने छुट छ ? वा शक्ति र सम्पत्ति भएकाहरु कानुन भन्दा माथि हुन्छन भनेर संविधानको ब्यावहारिक प्रयोग गरिरहेको छ सत्ता ?
आस्था राउतलाई किन कारवाहि भयो भन्ने कुरा होइन कि ? किन पारस शाहलाई कारवाही भएन ? उस्तै प्रकृतिको घटनामा किन विभेद ? सबै जनता संविधान र कानुन पढेर त्यसको तारिफ गर्दैनन् । तात्कालिन सत्ता संचालकले ब्यावहारमा कसरी प्रयोग गर्छन् र त्यो समानतामा आधारित छ कि बिभेदमा आधारित छ त्यसकै आधारमा ब्यवस्थाको मुल्यांकन हुन्छ । जब सम्म सत्ता संचालकले जनताले अनुभूति गर्ने गरेर आचरणमा सरलता र कानुनमा समानता लागू गर्न सक्दैन , जतिनै राजनितिक ब्यवस्था परिवर्तन भए पनि र जति नै उत्कृष्ट कानुन बनाएको दावा गरे पनि जनताले अनुभुति सक्दैनन् ।
यो ब्यवस्था हजारौँ नेपाली आमाको सर्बोत्तम छोराछोरिको बलिदानी , दसकौँ लामो संघर्षबाट प्राप्त ब्यवस्था हो । हिजोको बिभेदकारी ब्यवस्थाको बिकल्प हो संघिय गणतन्त्र यसको अनुभूति आम नेपालिले गर्न सक्ने बनाउनु नै अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तब्य हो । उस्तै घटना तर विभेदपूर्ण न्याय संपादन कानुनी राज्यको लागि शोभनिय हुँदैन । यस्ता घटनाले सरकारको बिश्वसनियता मात्र घटाउँदैन कि ब्यवस्था प्रती नै नकारात्मकता सिर्जना गर्छ ।
Previous Previous post: फ्रेण्ड्स क्लबसँग च्यासल पराजित
Next Next post: २९ बर्षीया महिलाद्वारा १४ बर्षे बालक बलात्कृत